China KZJ Series Product Presentation mpanamboatra sy mpamatsy | KAIQUAN
Paompy slurry KZJ, paompy slurry centrifugal karazana marindrana tokana, dia karazana paompy sy paompy slurry mahatohitra harafesina novolavolain'ny orinasa Shijiazhuang. Miaraka amin'ny fangatahan'ny paompy slurry dia mitombo ny herin'ny herinaratra, metallurgy, injeniera simika, fitaovana fananganana.
Paompy slurry KZJ, paompy slurry centrifugal karazana marindrana tokana, paompy slurry mahazaka karazana akanjo vaovao sy harafesina novolavolain'ny Shijiazhuang anay orinasa. Miaraka amin'ny fangatahan'ny paompy slurry dia mitombo ny herinaratra, metallurgy, injeniera simika, akora fananganana, ary indostria fototra hafa, ny paompy fandinihana ny fepetra miasa sarotra sy manokana an'ny fampiharana novolavolaina. Ny orinasa dia nanintona ny tombony azo tamin'ny fandrosoana teknolojia sy zava-bita ao an-trano sy any ivelany rehefa manamboatra hydraulic modely sy rafitra ary mifidy fitaovana tsy mahazaka akanjo ho an'ity andiana paompy ity.
Ho fanampin'izay, nanampy i Kaiquan ny mampiavaka azy manokana endrika mampiavaka an'io andiany. Ny paompy dia manana ny tombony amin'ny maha-avo mahomby, miaraka amin'ny angovo mahery fahafaha-mitsitsy, hovitrovitra kely, tabataba ambany, fandidiana azo antoka, fiainana maharitra sy mora fikojakojana. Ny paompy zava-bita tonga an-trano ambaratonga mitarika, ary ny fahombiazana index ny ankamaroan'ny paompy mahatratra ny fandrosoana iraisam-pirenena haavo. Famaritana ny vokatra mifanaraka amin'ny JB / T8096-1998 fenitra ho an'ny Centrifugal Slurry Pumps.
Teo aloha: Fanolorana ny vokatra vita amin'ny paompy WQ / YT
Manaraka: KZJXL Series Submerged Slurry Pumps
Paompy famonoana afo an'ny XBD-DP